Fillannoo itti adeemaa jirru kanatti, ABO filachuun bu'aan isaa maali? Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFillannoo itti adeemaa jirru kanatti, ABO filachuun bu’aan isaa maali?
Fillannoo itti adeemaa jirru kanatti, ABO filachuun bu’aan isaa maali?
1. Oromummaa cimsa.
2. Nagaa fida; sodaa fi kijiba balleessa.
3. Abbaa biyyumma Oromoo mirkaneessa.
4. Afaaniif aadaa keenyatti nuboonsa.
5. Haqa bade ture deebisa.
7. Diinagdee Oromiyaa guddisa.
8. Ofiin of nubushiisa.
10. Walabummaa dagaagsa.
11. Abdii nu horachiisa.
12. Diina Oromoo boquu cabsa.
By: Dr Bedassa Tadesse
ONN: Mudde 5,2019-Dadar Hararge
Addi Bilisummaa Oromoo waraqaa beekamtii boordii filannoo biyyaaleessaa irraa Sadaasa 15,2019 erga fudhatee qabee uummata isaa waliin bakkoota garaagaraatti mariitti jira.Marii isaa kanaan ABO’n dhimma nageenya saba isaa Oromoo, dhimmoota rakkina sabichaa irratti fuulleffataniif haala filannoo bara 2020 irratti marii taasisaa akka jirutu gabaafamaa jira.
Kana malees ABO’n tarsiimoo fi kaayyoo isaa uummata isaa Oromoo fi saboota Cunqurfamoo impaayera biyyattii barsiisaa kan jiru ta’uu gabaasaa jiran. Addi Bilisummaa Oromoo waan hunda dura, adda durummaan kan inni jaallatuuf kan inni bakka laatuuf Nagaa fi nageenya sabaaf sablammootaa ta’uus barsiisaa jira. ABO’n filannoo miilanaa shakkii malee akka injifatus dubbatee jiraachuun kan beekamudha. Haaluma kanaan guyyaa har’aa Mudde 5,2019 Baha Oromiyaa Hararge Dadar keessatti uummata isaa Oromoo waliin waltajjii marii irra jiraachuu nuu gabaasan.Uummatni Oromoo gaaffilee qabuu fi yaada isaa karaa ifaa ta’een waltajjii ABO irratti argamee dhiyeessuu akka qabus dhaaman!
Qalbeessaa Dhangi’aa akka gabaasetti
“Ministera, Minister de’etaa waggoota 30 dabraniif takkaa hin argatin erga ani dhufee Amaarri argate” gaafa Dr. Abiy jedhu san jara callisiisuuf nutti fakkaatee ture. Garuu bubbullee argine. Jara gammachiisuuf osoo hin taane jaruma humneessaa ture jedheen amane amma. Jarri humna jabeeffannaan Oromoo gadi qabuutti kaate. Garuu jara biratti akkas jechaa, Oromoo biratti ammoo “akka aangoon Oromoo harkaa hin baane godhaa jira” jechuun wal faallessa. Osoo ta’eyyuu aangoo duwwaa kan waan tokko Oromoof hin goone maal Oromoo fayyada?
Ibsa ijjannoo Miseensota ODP irraa
Ilmaan oromoo yakka tokko malee baatii 10 oliif mana hidhaa keessatti dararamaa jiran